ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့သမျှ”
၂၀၀၈ ဖြစ်ပျက်သမျှတွေကို အကျဉ်းချုံး မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်စရာပါ။
၂၀၀၉ မှာ အားလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။
ကိုပေါလည်း ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေရော မန့်မန့်ရှည် တွေရော ဆက်ရေးနိုင်ပါစေဗျို့။
မဒမ်ပေါလည်း ချစ်စွာသောကိုပေါနဲ့အတူ ၂၀၀၉ ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
ကိုပေါရေ 2008 မှာဖြစ်ခဲ့သမျှ ကိုလာဖတ်သွားပါတယ်
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ......
ဆက်ပြီးတော့လည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဒီထက်ပိုတိုးပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ....... ပြီးတော့ ပို့စ်တွေများများ ရေးနိုင်ပါစေဗျို့ ..........
ခုလေးတင် ၂၀၀၈ နောက်ဆုံးမိနစ်တွေကို count down လူပ်တာထိုင်ကြည့်နေခဲ့တာ။
မီးပန်းတွေဖောက်တဲ့နေရာမှာ MC နှစ်ယောက်အချီအချ ပြောနေကြတာ ၂၀၀၈ မှာ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေအကြောင်း။ ကိုပေါ ရေးထားတာဖတ်ရတာအဲဒိအတိုင်းပါပဲ..အိုဘားမားအကြောင်းပြောသွားတာတောင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သွားတူနေပါရောလား။ မြန်မာ့အရေး၊ စလုံးနဲ့ ကမ္ဘာ့အရေးလေးတွေ အနှစ်ချုပ်ထားတာ ၊ ၂၀၀၈ ဘလော့ဂ်ကောင့်ဒေါင်းအစစ်ပါပဲ။
ကိုပေါတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ လှေလှော်စားစရာလိုတော့ဘူး။ တီဗီချယ်နယ်မှာ သူတို့ လိုလုပ်လို့ ရပီ။ ဟိုလင်းလက် ကြယ်စင်မင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့ ပုံထဲကလို လန်ကွတ်တီကြီးနဲ့ တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ..
Happy New Year to Ko Paw & Family !!
Happy New Year!!!! ကိုပေါရေ့...
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့သော နှစ်သစ် မင်္ဂလာ ၂၀၀၉ ပါဗျာ... :)
လူတိုင်း တရားတာ ကြိုက်တယ်။တရားသိ၊ တရားရှိ၊ ဒါပေမဲ့ တရားတာကို လုပ်နိုင်တဲ့လူ အလွန့်အလွန်နည်းလှတယ်။ တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတောင် မတရားလောဘဇောနဲ့ နာနေသူတွေအများကြီးပဲ။ ကိုယ့်အမှားကိုသိပြီး ပြင်ရဲတဲ့လူတောင် တော်တော်ရှားလာတယ်။ တရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နက်နက်နဲနဲဝေေ၀ဆာဆာပြောနိုင်တဲ့လူ များပြားပြီ။ တရားသိ၊တရားရှိ၊ တရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လိုက်စားသူအတော်နည်းပါးတယ်။ ရတနာသုံးပါး၊ ငါးပါးသီလလုံတဲ့လူ လောကမှာမရှိသလောက်ဖြစ်လာပြီ။အပေါ်ယံ တရားစာဖတ်ပြီး မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေများများလာတယ်။ အမှားကိုဝန်မခံပဲ တရားရှိဟန်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေ များများလာတယ်။ လောဘ ကစတာမှန်ပေမဲ့ ရက်စက်မှုတွေကိုသွေးအေးအေးနဲ့ လုပ်တတ်သူတွေများများလာတယ်။ လူတော်တော်များများ မတရားတာခံရမှ တရားဟောကောင်းတဲ့လူတွေကိုစင်ပေါ်တင်ပြီး ကျိုးကြောင်းပြတရားတွေ၊ ဒေါသပြေ တရားတွေ၊ လောဘပြေတရားတွေကို နားထောင်ကောင်းအောင် ဟောတတ်တဲ့လူတွေများများလာတယ်။ မတရားတာတကယ်ခံရတဲ့သူတွေ အတွက်အစစ်အမှန်တရားကဘယ်မှာလဲ။ မတရားလုပ်နေသူတွေကော သူတို့မတရားတာကိုနောင်တရကြပြီး တရားစစ်တရားမှန်နောက်ကို လိုက်စားနေကြပြီလား။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုတဲ့။ ငါမှာကောတရားရှိရဲ့လား။နေ့စဉ်တရားတာတွေကို ကြံစည်ကြိုးစားအားထုတ်နေရဲ့လား။ ကိုယ့်အပြစ်၊ ကိုယ့်အမှားကို သိပြီးပြင်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ပြီလား။အစစ်အမှန်ပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီလား။ ချမ်းသာမှုကိုတွေ့ပြီလား။ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပြီလား။ ကိုယ်ဟာ တရားတဲ့လူဟုတ်မဟုတ် ထက် တရားတာကိုသိပြီးကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတတ်ဖို့ကတာ အဓိကကျတယ်ဆိုတာ သိပြီလား။ တရားဆိုတာဘာလဲ............ လူအများ တရားမျှတဖို့အတွက် ကျင့်သုံးဖို့လား။ မတရားတာလုပ်ဖို့ရန်အတွက် အသုံးချဖို့လား။ သိဖို့ထက် ပြင်ရဲတဲ့စိတ်ကအဓိကပဲ။ တရားစစ်တရားမှန်ရဖို့အတွက် ပြင်ရဲပြီလား။ တရားစစ် တရားမှန်ဆိုတာဘာလဲ။ ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးမချပါနဲ့။ ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်းပါ။ သမာအာဇီဝ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဇွဲ၊လုံ့လနဲ့ အသိပညာ၊အတတ်ပညာ၊နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်သူဟာ စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်။ အချောင်မခို၊ အလွယ်မလိုက်သူဟာ လိမ်ညာခံရခြင်း ကင်းစင်တယ်။ လောဘမဖက်စီးပွားရှာနိုင်မှ ရှာသမျှစည်းစိမ်ဟာ ငါ့စည်းစိမ်ဖြစ်တယ်။သေရင်တောင် ပါသွားနိုင်တယ်။ ပူလောင်မှုသောကကင်းစင်တယ်။ တရားတာလုပ်ချင်တဲ့သူဟာ ဒါတွေကိုစံထားပြီးစသင့်တယ်။ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပြီး လောကတန်ဖိုးနားလည်ဖို့အတွက် မိမိစိတ်ကိုမိမိသတိနဲ့ အမှန်သိပြီးအမှန်ပြင်တတ်မှ တန်ဖိုးရှိမှာ။ လူတိုင်းကိုမေးကြည့်ပါ။ တရားတာကိုလူတိုင်းတောင်းဆိုနေတယ်။ တရားတာဖြစ်ဖို့အတွက် သင်ကောတရားရဲ့လား။ ငါကောတရားရဲ့လား။ လူတွေအားလုံးကော တရားတာတွေကို သိပြီးလုပ်ကြရဲ့လား။ ငါကြိုက်တာ တရားပဲဆိုပြီး တရားထင်တဲ့လူတွေကြောင့် မတရားခံနေရသူတွေရဲ့ ဆင်းရဲခြင်းကို ကိုယ်ချင်းစာနားလည်တတ်ပြီလား။ မတရားခံနေရတယ်ဆိုပြီး တရားတာလုပ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မေ့နေသူတွေအနေနဲ့ကော ဒီအတိုင်းဆက်နေလို့ကောတရားတာတွေဖြစ်လာမလား။ အသိဥာဏ်ရှိပါ။ကြိုးစားပါ။ တရားရှိအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ယောက်လုပ်မှ တစ်ယောက်ရမှာ။ မတရားတာတွေများနေတာဟာ မတရားမှုကို လုပ်တဲ့သူများနေတဲ့သဘောပဲ။ တရားတာကိုသိပြီးလုပ်မှသာ တရားတာတွေလောကမှာဖြစ်နေမှာ။ မတရားတာကိုကျော်ဖို့ တရားတာလုပ်တဲ့လူများလာမှဖြစ်မှာ။ မတရားလုပ်တဲ့လူကိုသိပြီးအပြစ်တင်နေဖို့ထက် တရားကြိုက်၊တရားသိ၊တရားရှိ၊တရားလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေများ လာမှသာ မတရားမှုတွေအလိုလိုကင်းစင်သွားမှာ။ တရားရှိဖို့အတွက် ကြိုးစားကြပါ။ အသိပညာ၊အတတ်ပညာ၊နည်းပညာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် လေ့လာဆည်းပူးကြပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မွေးပါ။ မပျင်းပါနဲ့။ အလုပ်မှာပျော်မွေ့ကြပါ။ ကျွန်စိတ်မမွေးပါနဲ့။ မျှတစိတ်ရှိပါ။ ကောင်းတာလုပ်ဖို့ ၀န်မလေးပါနဲ့။ ဆင်ခြေမများပါနဲ့။ စံအတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ။ တရားဆိုတာဘာလဲ။ အလုပ်ပါ။ လက်တွေ့ပါ။ မပျင်းတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့လက်တွေ့ပါ။ အပြောမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ကျိူးဖက်တဲ့ လက်တွေ့မဟုတ်ပါ။ စံအတိုင်းလူအများ တရားမျှတမှုဖြစ်လာဖို့အတွက်တာ။ ငါကော တရားရဲ့လား။ တရားတာကိုကော စလုပ်နေပြီလား။ ပျင်းတဲ့စိတ်ကို ဖျောက်နိုင်ပြီလား။ အချောင်ရချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်နိုင်ပြီလား။ လူသားအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တရားတာလုပ်နိုင်အောင် ၀ိုင်းကူညီပေးကြပါ။ တရားသိ၊တရားရှိ၊တရားပေါ်နေတဲ့ လောကလေးဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးကြပါ။ သင်ပါဝင်မှသာ တရားရှိတဲ့လောကဖြစ်လာမှာ။ တရားရှိတဲ့လောကဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တရားတာတွေကို လုပ်၊ သင်ကလည်း တရားတာတွေကို နေ့စဉ်လုပ်မှဖြစ်မှာ. တရားတာကိုဝိုင်းကူလုပ်ကြမလား။ လူသားအားလုံးအတွက် တရားတဲ့လောကလေးဖြစ်အောင် မိမိမိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်း၊အသိုင်းအ၀န်း ကိုနေ့စဉ်တရားတာလေးတွေလုပ်ဖို့ အကူအညီတောင်းကြပါ။ အသိပေးကြပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်းတရားရှိပြီး တရားတာကိုလုပ်ပြီးကူညီကြပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်ချင်၊ ကိုယ်ထင်တာကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့တရားပါ။ တရားရအောင် သင်တို့အကူအညီပေးကြပါ။တရားရအောင် ကူညီနိုင်ကြမလား။
Happy New Year ပါ ကိုပေါ၊ မဒမ်ပေါနဲ့ဂျူနီယာပေါ ရေ...
ကိုမောင်ရင်ပြောသလိုပဲ- စီအန်အန် ရီဗျူး ထိုင်ကြည့်လိုက်သလိုပါပဲ။
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။ ဗမာပြည်အတွက် ပိုပြီး..အားထုတ်နိုင်ပါစေ။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ဒါတွေကြောင့် ကိုပေါ ဖြစ်နေတာ..လို့ ပြုံးရင်း ဖတ်မိတယ်။ တနှစ်တာ ကောင်းမှုတွေအတွက်လဲ သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုပေါ၊ မဒမ်ပေါ၊ လီလီပွတ် ပေါ လေးတို့ ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ နှစ်သစ် မင်္ဂလာ..ပါနော်..
ကိုပေါကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ၂၀၀၉ အနှစ်ချုပ် အတွက်
လာရောက်ဖတ်ရှုကာ ဆုတောင်းပေးသွားသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
ကိုပေါ နဲ့ ကိုဟန်သူ သူငယ်ချင်း၂ဦးအတွက်
နှစ်သစ်၊ ဇန္န၀ါရီထဲပဲရှိသေးတော့ HAPPY NEW YEAR ပါလို့ Comment နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ သီးလေးသီးကတော့ အမေရိကားတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် သွားနေပါပြီ။ မြန်မာ့အရေးကို သီးလေးသီးက မြန်မာပြည်တွင်းကစခဲ့တယ်။ စင်ကာပူကကို ပထမဆုံးရောက်ခဲ့ချိန် သီးလေးသီးအဖွဲ့တွေကို လမ်းပြကြယ် လုပ်အားပေး ၂အိမ်မှာ တည်းခိုရင်း၊ စီစဉ်သူ ကိုဘိုဘိုဝင်းရဲ့ ဗွီဒီယိုအခွေ မှတ်တမ်း .. စသဖြင့် တွေကတော့ မမေ့နိုင်တဲ့ .. လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်၊ ၂၀၀၈ တွေပါပဲ။ စင်ကာပူအကြောင်း အများကြီး မှတ်တမ်းတင်လို့ နှုတ်တရာ၊ စာတလုံး ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆက်လက် မှတ်တမ်းတင်တဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ် ထုတ်နိုင်အောင် Comment ရေးသူမိတ်ဆွေများ ကိုပေါကို အားပေးကြပါအုံး။.... (ကိုပေါ စာအုပ်ထုတ်ပြီး .. Best Seller ဖြစ်သွားရင် .. မိုးပေါ်တက်မသွားနဲ့ဦး .. နော်၊ ကိုဟန်သူက ထိန်းပေးထားမှာပါ .. ရယ်စရာပြောတာနော် .. ) ..